शिक्षा-स्वास्थ्य – Page4– सप्तरंगी एफ एम
Home / शिक्षा-स्वास्थ्य (page 4)
दमक ट्राफिकद्वारा सचेतना कार्याक्रम
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २१/ ईलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकले जिल्ला रेडक्रस झापा संगको सहकार्यमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला झापाको आयोजनामा भैरहको ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम अन्गर्तत ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ईलाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख दधिराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । अभियान अन्तर्गत आज दमकको मुख्य चौकमा ट्राफिक सचेतना लेखिएका ब्यानरहरु राखिएको उहाँले ...
गौरादहको कञ्चनजंघा आधारभूत विद्यालयमा न्यानो कपडा र शैक्षिक समाग्री बितरण
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २१/ झापाको गौरादह ४ मा रहेको कञ्चनजंघा आधारभूत विद्यालयमा न्यानो कपडा र शैक्षिक समाग्री बितरण गरिएको छ । दमकका स्टेशनरी व्यवसायी, लायन्स क्लब र बालिका देन्सु योगीले सयुक्त रुपमा स्टेशनरी समाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । योगीले नवौ जन्मदिनका अबसरमा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्वीटर बितरण गर्नु भएको थियो । यस्तै लायन्स क्लब अब गौरादह ग्रिन सिटीले समेत न्यानो कपडा ...
भट्टराई क्लिनिक दमकमा प्रसुति तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञको सेवा सुरु
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर २०/ दमक ६ नगरपालीका अगाडी रहेको भट्टराई क्लिनिकले बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ । दमककै पुरानो औषधि क्लिनिको रुपमा परिचिति भट्टराई क्लिनिकले प्रसुति तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट दैनिक सेवा दिन सुरु गरेको हो । बिक्रम संबत २०४० साल देखी सोहि ठाउँमा रहेर यस क्षेत्रका नागरिकाहरुको स्वास्थ्यमा सेवा दिँदै आएको क्लिनिकले सुरुवाति चरण देखीनै बिभिन्न ...